सेयर सदस्यलाई थाहै नदिई मनकामना साकोस एकीकरणको तयारीमा - Sainokhabar
होमपेज / नगर / सेयर सदस्यलाई थाहै नदिई मनकामना साकोस एकीकरणको तयारीमा
सेयर सदस्यलाई थाहै नदिई मनकामना साकोस एकीकरणको तयारीमा
शुक्रबार, असार १९, २०७७ , साइनो खबर
साइनो समाचारदाता पथरी,
मोरङको पथरी शनिश्चरे १ मा रहेको मनकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकीकरण (मर्ज) हुने तयारीमा छ । इटहरीमा रहेको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा एकीकरण हुनेकुरा भए पनि सेयर सदस्यहरु अनविज्ञ रहेका छन । साधारण सभामा एकिकरणको प्रस्ताप राखि सेयर सदस्यबाट पास गरि तयारी गर्नु पने भए पनि कार्य समितिका केहि संचालकहरुको बल मिच्याईमा एकिकरण हुन लागेको सेयर सदस्य भुपाल थापा बताउछिन ।
सेयर सदस्यको एक एक रुपयाँ संकलीत रकममा कार्यसमितिले थाहै नदिई अर्कौ कार्य क्षेत्रको सहकारी संग एकिकरण गर्दा सहकारी र सहकारीका संचालक समिति प्रति संका उब्जीएको छ ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर एकीकरण हुन लागेकाले शेयर सदस्यहरु पनि अन्योलमा परेका छन । नगरकै उत्कृष्ट संस्था एकीकरण हुन किन इटहरी सम्म पुग्न खोज्दैछ भन्ने आशंका पनि थपिएको सेयर सदस्य सुमन श्रेष्ठ बताउछन । आधिकारिक रुपमा एकीकरण हुनेकुरा हुदैछ भन्ने सुनेको हुँदा आगामी दिनमा यसले दिने फाइदा के हुन्छ भन्ने कुराले आफुलाई अन्यौलमा पारेको श्रेष्ठले बताए ।
एकीकरण हुने विषयमा सञ्चालक समितिमा पनि पूर्ण सहमती नरहेको सदस्य प्रदिप पराजुलीले बताए । पराजुलीका अनुसार पटक पटक बैठकहरु भएका छन तर एकीकरणका सबै प्रकृया पुगीसकेको छैन । ११ सदसीय समितिमा ४, ५ जनाले मात्रै एकीकरणका लागि सहमती जनाएको पराजुलीले बताए ।
एकीकरणका लागि चाहिने मुख्य कुरा साधारणसभा हो । सभाले पास गरेर मात्रै एकीकरणका लागि जान सकिन्छ तर त्यसो भएको छैन । सुनसरीमा रहेको सहकारी संग एकिकरण हुदा पथरीशनिश्चरेमा रहेका मनकामनाका सेयर सदस्यले केन्द्रको भरमा रहनु पर्ने हुन्छ । जस्ले गर्दा सेवा सुविधामा ढिलाई हुनसक्छ । सुनसरीमा रहेको सहकारी संग एकिकरणको प्रकृयामा गएको सेयर सदस्यलाई थाहै छैन । तर यता सहकारीले साधारण सभामा पास नगराई एकिकरणको प्रकृयाका लागि अनुमती नै पाई सकेको छ ।
एकिकरणको प्रकृयामा रहेको र प्रदेश सहकारी कार्यलयबाट एकिकरण गर्ने पुर्व स्वकृती लिएको मनकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष युवराज भट्टराईले बताए । सहकारीको प्रधान कार्यलय सुनसरीमा रहे पनि नाम, विनियम, दर्ता र पान नं. मनकामनाकै रहने छ भने साधारण सभा नभए पनि सेयर सदस्यको राय लिन संचारमाध्यममा सुचना प्रसारण गर्ने भटराईले जानकारी दिए ।
सोहि सहकारीका पुर्व अध्यक्ष तथा सहकारीबाट प्रतिनिधी भएर जिल्ला सहकारी संगठनको अध्यक्ष सोमनाथ निरौला भने “मर्च हुनु राम्रो हो तर म्यान्डेट साधारण सभामा सेयर सदस्यबाट पास गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेर हुनु पर्ने बताउछन । भोलि मर्च भए मनकामनाको मुख्य कार्यलय सुनसरी रहन्छ । त्यसपछि जिल्ला सहकारी संगठन मोरङको अध्यक्ष पाएको मनकामनाको पद के हुन्छ भन्ने हल्ला हुन थालेको छ ।